Ndị SEO dị ọcha nwere ike ịrụ ụka na ụfọdụ atụmatụ m na-atụle ebe a n'ihi na ha nwere ike ọ gaghị ekwu na ọ bụ ọkwa. M ga - arụrịta ụka banyere Nchọgharị Nchọgharị ọ bụla, agbanyeghị, na njin ọchụchọ ahụ gbasara ahụmịhe onye ọrụ - ọ bụghị search engine algorithms. Kasị mma ị na-emepụta saịtị gị, tinye ego na ọdịnaya dị ukwuu, na-akwalite ọdịnaya ahụ, ma soro ndị ọrụ gị rụọ ọrụ… mma saịtị gị ga-arụ ọrụ na nhazi ọchụchọ.
Ndị ọrụ igwe nke otú igwe nyocha crawler na-achọta, ndeksi na ọkwas gị na saịtị ahụ agbanwebeghị ọtụtụ afọ… mana ikike ịdọta ndị ọbịa, mee ka ndị ọbịa ahụ kerịta ọdịnaya gị, ma nwee injin nchọgharị ahụ agbanweela nke ọma. Ezi SEO bu nnukwu ahụmịhe onye ọrụNa sistemụ njikwa ọdịnaya dị oke mkpa maka ọganiihu gị.
Ndabere: Ndabere na SEO? Well… ma ọ bụrụ na ị na-atụfu gị na saịtị na ọdịnaya, ọ bụ ezigbo ike ọkwá. Inwe nkwado siri ike na nkwado nkwado yana yana ịchọọ, nkwado ndabere na saịtị ma weghachite na-enyere aka.
Ihe Nchọgharị Nchọgharị: Chrome na Safari na-enyezi ozi jikọtara ya na sistemụ arụmọrụ. Mgbe mmadụ dabara na saịtị gị, a na-ajụ ha ma ha ga-achọ ka agwa ha mgbe emelitere ọdịnaya ahụ. Ma Ọkwa na-eme ka ndị ọbịa lọta!
Canonical URL: Mgbe ụfọdụ, a na-ebipụta saịtị na otu ibe nwere ọtụtụ ụzọ. Ihe omuma di nfe bu na ngalaba gi nwere ike inwe http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Twozọ abụọ a n'otu peeji nwere ike kewaa ịdị arọ nke njikọ na-abata ebe ibe gị anaghị ahọpụta nke ọma dị ka ọ nwere ike ịbụ. URL nwere ike ịbụ ihe zoro ezo nke koodu HTML na-agwa engines ọchụchọ nke URL ha kwesịrị itinye njikọ na ya.
Editọ ọdịnaya: Onye editọ ọdịnaya nke na-enye ohere H1, H2, H3, siri ike na italiki ka agbachitere ederede. Idozi onyonyo kwesiri ikwe ka edozi ihe ALT. Idozi mkpirisi mkpirisi gha enye ohere maka TITLE element edezi. Ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ CMS sistemụ nwere ndị ndezi ndezi ọdịnaya!
Nrụ ọrụ arụmọrụ dị elu: Ọsọ bụ ihe niile mgbe ọ bịara n’ihe nchọta ngwa ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-anwa ịchekwa ego ole na ole na Bochum, ị na-ebibi ikike gị nke ịdebanye aha na nke ọma na injin ọchụchọ.
mobile: Mobile search na-agbawa na ojiji dị ka smartphones na mbadamba na-adiaha ofụri. Ọ bụrụ na CMS gị anaghị ekwe ka websaịtị na-anabata HTML5 na CSS3 (nhọrọ kacha mma)… ma ọ bụ opekata mpe, ọ bụrụ na edegharịrị ederede gaa na ekwentị mkpanaka kachasị mma, ị gaghị ahọta maka nyocha ekwentị Ọzọkwa, ọhụrụ mobile formats dị ka IGBOB nwere ike nweta ọdịnaya gị nke ọma maka ọchụchọ sitere na ngwaọrụ Google.
Ntughari bara uba: Search engines na-enye microdata formats maka pagination na breadcrumb njirimara n'ime saịtị gị. Ọtụtụ mgbe, achọrọ itinye akara a n'ime isiokwu ị na-etinye na CMS gị ma ọ bụ ịnwere ike ịchọta modulu na-enye gị ohere itinye ya n'ọrụ mfe. Snippets bara ọgaranya dị ka atụmatụ maka Google na OpenGraph maka Facebook na-eme ka nsonaazụ ọchụchọ na ịkekọrịta ga-eme ka ọtụtụ ndị ọbịa pịa.
search: Ikike ịchọọ n’ime wee gosipụta nsonaazụ dị mkpa dị oke mkpa maka ndị ọrụ iji chọta ozi ha na-achọ. Nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ ga-enyekarị ngalaba nke abụọ maka ndị ọrụ ọchụchọ ịchọọ n'ime saịtị!
Security: Soliddị nchebe siri ike na Bochum dị mma ga-echebe saịtị gị ka a ghara ịwakpo gị ma ọ bụ tinye koodu obi ọjọọ na ya. Ọ bụrụ na saịtị gị na-enweta koodu obi na ya, Google ga-egosiputa gị ma gwa gị na Webmasters. Ọ dị oke mkpa na ịnwere ụdị nlekota ma ọ bụ atụmatụ nchekwa ejiri na CMS gị ma ọ bụ na ngwugwu ngwugwu gị ụbọchị ndị a.
Mgbasa Ozi: Ikike ịdepụta ọdịnaya gị na akpaghị aka site na iji aha kachasị mma na onyonyo ga - eme ka ọdịnaya gị kerịta. Ikekọrịta ọdịnaya na-eduga na kwuru banyere ọdịnaya gị. Mentions iduga njikọ. Na njikọ na-eduga n'ọkwá. Facebook na-ebido ederede ngwa ngwa, usoro iji bipụta isiokwu niile ozugbo na ibe ika gị.
Syndication: Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-agụ akwụkwọ na ndị na-agụ RSS adaala n'ụzọ dị n'akụkụ nke ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ikike ịkekọrịta ọdịnaya gị n'ofe saịtị na ngwaọrụ ka dị oke egwu.
Tags: ampcms seomicrodataọgaranya snippetsrobots.txtsearch engine njikarịchaAseo ndenye egoSitemapokwu mkpokọtaxml saịtị saịtị